Firmware များ မျှဝေသူ: Vital Firmware များ..........
Firmware များ မျှဝေသူ
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားသော Firmware များဖြစ်ပါသည်...............................
MOMO Tablet Firmware
ALL Model Firmware
Vital Firmware များ..........
1. Vital P6 Firmware 100% OK
2.. Vital V1 Firmware
3. Vital M7 Firmware
Posted by Error မရှိ Firmware များ at 5:30:00 PM
မင်္ဂလာပါ လာရောက်လည်ပတ်ကြသူများ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကျပါစေ......Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ ကြိုဆိုပါသည်
နံနက် 8:00 AM မှ ည 11:00 PM
Firmware ၀ယ်ယူချိန် နံနက် 8:00 AM မှ ည 11:00 PM အထိသာဖြစ်ပါသည် Firmware ၀ယ်ယူချိန် မှာ အပြောင်းလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ အချိန်အပြောင်း အလဲများ ကို ဒီနေရာတွင် ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် နေ့လည်ပိုင်း ခဏတာ ဖုန်းပိတ်ထားတတ်ပါသည်
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးမှ Download ဆွဲပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ တင်ထားသော Firmware များသည် ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေသော Firmware များကိုသာ မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည် Phone Model အနိမ့်အမြင့် Version များကြောင့် Error တတ်ခဲ့ရင် Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ မိမိ အတွက် တကယ်အသုံးဝင်မည်ဆိုမှသာ Download ဆွဲပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေး သက်သက်လုပ်စားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ၀ယ်ယူသုံးစွဲရပါသည်။ ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါ။ အတွေ့ကြုံများနှင့် သာပြန်လည် မျှဝေ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ ၀ယ်ယူပြီးအဆင်ပြေပါက Facebook မှ လည်းပြန်လည် ရှဲယ် ယူပြီး မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည် မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ....လို့..... Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်............. ရွှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ...............
ဒီနေ့ တစ်နေ့တာ အတွက် ကံကောင်းခြင်း ၊ အောင်မြင်ခြင်းများကို လာရောက်ယူဆောင်သူများ
MOBILE FIRMWARE SELECTION
SAMSUNG FIRMWARE များ
HELLO FIRMWARE များ
SYH FIRMWARE များ
GFIVE FIRMWARE များ
BLUEMIX FIRMWARE များ
PHICOMM FIRMWARE များ
ILOVEFA FIRMWARE များ
ATTILA FIRMWARE များ
HOPO Firmware များ
INTEX FIRMWARE များ
KENBO Firmware များ
KENXINDA Firmware များ
ZTE Firmware များ
BOSS STYLE Firmware များ
OPEN Firmware များ
Hisense Firmware များ......
Kimfly Firmware များ
Vital Firmware များ
X-BO Firmware များ
Leagool Firmware များ
CoolNet Firmware များ
KKP Firmware များ
MyPhone Firmware များ
Titan Firmware များ
SingTech Firmware များ
M-House Firmware များ
MBO Firmware များ
MOMO Firmware များ
Teeno Firmware များ
All Model Firmware များ
CHINA & CLONE FIRMWARE
ANDRIOD USB DRIVER Free Download
Blog မှ ကြော်ငြာချက်
Firmware များ မျှဝေသူ Blog မှ တင်ထားသော PHONE အမျိုးစားများထဲမှ အရေးပေါ် FIRMWARE များလိုအပ်မှုရှိပါက PHONE ဆက်ပြီး မှာထားနိုင်ပါတယ်........ ကျွန်တော် ဆီမှာအဆင်သင့်ရှိ ခဲ့ရင် နာရီပိုင်း အတွင်း Upload တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ စေတနာကိုတန်ဖိုးထားနားလည်တတ်သူတိုင် တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာရှိလာမှာပါ။ စမ်းသပ်ပြီးသော Firmware များကိုသာ ဦးစားပေး တင်ပေးသွားမှာပါ.....PH-09793945299 အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ.................... အထူးအစီစဉ်အနေဖြင့် သူငယ်ချင်း တို့ အရေးပေါ်လို့အပ်သော Firmware များ ကို Viber မှ စာပို့ပြီး မှာယူနိုင်ပါသည်။ အဆင်သင့်ရှိခဲ့ရင် နာရီပိုင်း အတွင်း Upload တင်ပေးသွားပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်.............. အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ................
Error မရှိ Firmware များ
Huawei Y541-U02 B114 Update Firmware
Coolpad 7722 Cam Fix Flashtool Firmware
CoolNet 7060 Plus 100% Test Ok
KKP K802 Firmware
Coolpad 7061s-S40 Firmware
Vital V1 Firmware
Leagool G10 Firmware
X-BO X7 Company Firmware
GFive Gpad 701 Company Firmware
GFive President Smart5Company Firmware
Attila N6 (ATTILA+APPLE) Company Firmware
Attila Z1 Company Firmware
Kimfly K1 to Z7 2Cam Company Firmware
Open G11 Company Firmware
Kimfly Z Company Firmware
Open G7 Company Firmware
Huawei G610-T11 B152 Firmware
BossStyle Prime 8 Company Firmware
BossStyle Prime2Company Firmware
Coolpad 8079 Full Firmware
BossStyle Prime3Company Firmware
BossStyle G5 Company Firmware
BossStyle L6 Company Firmware
BossStyle G7 Company Firmware
Hello Smart 8 Company Firmware
Hello X200 Firmware Password ဖြေရန် အခက်ခဲရှိတဲ့ B...
Hello Smart3Company Firmware
X-BO X8 Company Firmware
X-BO X13+ Company Firmware
X-BO Company Firmware များ
X-BO X14 Company Firmware
Kimfly Z1 to Z6 2Cam for Company Firmware
Kimfly Z1 to Z6 Company Firmware
Kimfly Z50 & Z51 Company Firmware
Kimfly E5 Company Firmware
Boss Style G6 Company Firmware
Boss Style G6 Plus Company Firmware
Kimfly E29 Company Firmware
Open G8 Company Firmware
CLONE FIRMWARE သီးသန့်
Open G12 Company Firmware
Open G2 Company Firmware
Vital P6 Firmware 100% Test OK..............
BossStyle G10 Company Firmware
Hisense E100T Firmware 100% OK
Kimfly Company Firmware များ
Kimfly E3 Company Firmware
Hisense 100% OK Firmware များ.......
Hisense U980 Test Ok 100%
PHICOMM C730Lw နောက်ထွက်တဲ့ အလုံးတွေအတွက် မြန်မာစာ...
OPEN G10 Company Firmware..........
Open G1 Company Firmware....
OPEN Company Firmware များ
GFive Classic7Conpany Firmware...........
OPEN G5 Company Firmware...........
BOSS STYLE Stock Rom များ.......
BossStyle G9 Stock Rom
SYH Firmware နောက်ထပ်ရရှိနိုင်မည့် Company Firmwar...
LENOVO Firmware 100% OK များ.............
LENOVO A850 Firmware 100% OK..............
ZTE Firmware 100% Test OK များ.............
ZTE N880E Firmware 100% Test OK ...........
KENXINDA Firmware များ 100% Test OK .............
KenXinDa F1 Firmware 100% Test OK .............